လက်ပံနှင့် Salt Lake City, ၏ installation: FSX, FSX: SE သို့မဟုတ် P3D4?
လက်ပံနှင့် Salt Lake City, ၏ installation: FSX, FSX: SE သို့မဟုတ် P3D4? 1 months ago5တစ်နှစ် #1352
တပ်ဆင်၏အစအဦးမှာ: ဘယ်လိုငါအဘို့အ install လုပ်ဖို့ wether ဆုံးဖြတ်နိုင် FSX, FSX: SE သို့မဟုတ် P3D4?
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောသုံးရေး Simulator ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ရှုခင်းသာခွငျးအားဖွငျ့နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်ဆိုပါကအတိုင်းဒေါင်းလုပ်ဖိုင်ကြီးတွေရဲ့အရွယ်အစားကနေ, ကငါထင် P3D4 နှင့်အရှင်ငါသာအဘို့အကာတပ်ဆင်လိုအပ်ပါတယ် P3D4.
လက်ပံနှင့် Salt Lake City, ၏ installation: FSX, FSX: SE သို့မဟုတ် P3D4? 1 months ago5တစ်နှစ် #1353
FSX ထို့နောက်ပဒေသာကိုင်တွယ်နိုင်, ငါမတိုင်မီအများအပြား installed ပါတယ်။ ့အဖြစ်ရိုးရှင်းသော, သင်ရှုခင်းအဘို့အ install လုပ်ဖို့လိုခငျြကိုမဆို Simulator ကိုရွေးချယ်ပါ။
လက်ပံနှင့် Salt Lake City, ၏ installation: FSX, FSX: SE သို့မဟုတ် P3D4? 1 months ago5တစ်နှစ် #1355
တဦးတည်းကိုပိုမို option ကို, ရှုခင်း installer ကို app ကိုလည်းရှိပါတယ်။ ငါအဘို့အကရှိခဲ့ FSX ဒါပေမယ့်ငါကအလုပ်လုပ်တယ်သေချာပါတယ် P3D အဖြစ်ကောင်းစွာ။ ဂရိတ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
လက်ပံနှင့် Salt Lake City, ၏ installation: FSX, FSX: SE သို့မဟုတ် P3D4? 1 months ago5တစ်နှစ် #1358
(ထိုနောက်ဆုံးပေါ်?) installer ကို 11.1 သုံးပြီးငါအဘို့အ install လုပ်ဖို့ရာ Simulator ကိုထို option ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ငါသာ "အလိုအလျောက်" နှင့် "အတိအကျ" တပ်ဆင်ခအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါသို့သော်ဤအမှု၌သာ, ငါ့ကိုဘယ်မှာတပ်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြကုန်အံ့မျှော်လင့်ပေါ်တွင်ဒုတိယကြိုးစားကြ FSX-path, မရရှိနိုင် FSX: SE နှင့်မ P3D4.
ဒီတစ်ခါလည်းငါအရာအားလုံးထက်စမ်းပါ။ သို့သော်သင်၏ပြန်ကြားချက်အတှကျကြေးဇူးတငျ။ Gero
လက်ပံနှင့် Salt Lake City, ၏ installation: FSX, FSX: SE သို့မဟုတ် P3D4? 1 months ago4တစ်နှစ် #1372
သင်သည်သင်၏ Simulator ကိုပြီးရင်စာရင်းမပါလျှင်သင့်ရဲ့ Simulator ကို setup ကိုမှန်ကန်မဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတယ်, ထိုစာရင်းထဲတွင်သင့်ရဲ့ Simulator ကို select လုပ်ပြီးနောက် "အလိုအလျောက်" installation ကိုရှေးခယျြရမညျဖွစျသညျ။ သော့ချက်ထို့နောက် Simulator ကို ISN '' မကောင်းတဲ့ setup ကို install လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှိခဲ့ဖြစ်စေပစ္စုပ္ပန်မပါလျှင် installer ကိုအစဉ်အမြဲ, သင့် Simulator ကိုအပြည့်အဝလမ်းကြောင်းကိုပါဝင်သောအဓိကအဘို့သင့် registry ကိုသို့ကြည့်ရှုသည်။
လက်ပံနှင့် Salt Lake City, ၏ installation: FSX, FSX: SE သို့မဟုတ် P3D4? 1 months ago4တစ်နှစ် #1373
ကျေးဇူးတင်ပါသည် - နောက်ဆုံးအဖြေကိုအတိအကျငါမျှော်လင့်ထားကြောင်းတစျခုဖွစျသညျ။ ဒါဟာ Simulator ကိုအသုံးပြုသင့်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ဦးခြေလှမ်းကိုအလိုအလျောက်နောက်ကြွလာ, အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
0.199 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်